ကေအိုင်အေနဲ့ မြန်မာ စစ်အစိုးရတပ်အကြား ပစ်ခတ်မှုဖြစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ကေအိုင်အေနဲ့ မြန်မာ စစ်အစိုးရတပ်အကြား ပစ်ခတ်မှုဖြစ်
Posted by cobra on Dec 5, 2010 in News | 13 comments
ကေအိုင်အို တပ်မဟာ (၃) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၁၆) နဲ့ ဗန်းမော်မြို့ အခြေစိုက် စစ်အစိုးရတပ် ခလရ ၂၃၆ တို့ ကချင်ပြည်နယ် လွယ်ကျယ်မြို့ အနီးမှာ ဒီကနေ့ နေ့လည်က ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ
ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) ၏ လက်ရှိ ဌာနချုပ်တည်ရာ လိုင်ဇာမြို့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားတခုတွင် လက်နက်ကိုင် ကချင်စစ်သည်များကို တွေ့ရသည့် မှတ်တမ်းပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: Kachin News Group
ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ကေအိုင်အို အရာရှိ တယောက်နဲ့ အာရ်အက်ဖ်အေ သတင်းထောက် ကိုရဲထက် က ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
– လွယ်ကျယ်ဘက်မှာ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်တယ်ကြားလို့၊ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။
“ဟုတ်တယ် တပ်ရင်း (၁၆) တွေနဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ နယ်မြေခံတပ်ပေါ့။ လွယ်ကျယ်နဲ့ မိုင်ဂျာယန်သွားတဲ့ လမ်းဘက်မှာ ရွာတွေက တပ်ရင်း (၁၆) နယ်မြေက တချို့ရွာ။ တချို့ရွာဆိုတာက လွယ်ကျယ်နဲ့ တပ်ရင်း ၆ နယ်မြေကြားမှာ။ ရွာ ၂ ရွာ ၃ ရွာက နအဖ စစ်တပ်လည်း မထိုင်ဘူး၊ ကျနော်တို့တပ်လည်း မထိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့လည်း ရောက်တယ်။ ကျနော်တို့လည်း ရောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနေရာမှာတွေက ကျနော်တို့ စစ်သားတွေက ထိုင်နေပြီ၊ အရင်တုန်းက မထိုင်ပေမယ့် အခုထိုင်တယ်။ အဲဒီမှာကို ရွာက သူတို့ အင်ဖော်မာတွေ ဘာတွေ သတင်းပေးတာ နေမှာပေါ့။ ဒီမနက်က စစ်သား အယောက် ၂၀ လောက်က တက်လာပြီး ကျနော်တို့ ပို့စ် ရှိတဲ့နေရာကို လာပစ်တာပေါ့။ လာပစ်တယ်ဆိုတာက သူတို့ ဟိုလိုမျိုး ပစ်တာမဟုတ်ဘူး။ ပစ်ပြီး ကျနော်တို့ ပြေးသွားအောင် ခြောက်လှန့်တဲ့ သဘောမျိုး ကျနော်တို့က ပြန်ခံပစ်တာပေါ့”
– ဘယ်လောက် ကြာသွားလဲဗျ။
“အဲဒါ ဘယ်လောက်မှ မကြာပါဘူး။ သူတို့ကလည်း သေနတ် သိပ်မဖောက်ပါဘူး။ ကျနော်ထင်တာ ၂ ချက် ၃ ချက်လောက်ပဲ ကျနော်တို့ ပြန်ပစ်တယ်။ ပြန်ပစ်တော့ သူတို့ကလည်း ရှေ့မတိုးတော့ဘူး။ ကျနော်တို့လည်း လူအင်အား ပြန်တိုးတယ်။ တပ်ရင်း (၁၆) နဲ့ တပ်မဟာ (၃) က စစ်ကူတွေနဲ့”
– သူတို့က ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲ နေထားကြလားဗျ။
“ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲ။ သူတို့က ပြန်ပြီး စခန်းချတယ် ဆိုတာက ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ်နဲ့၊ ဒီအတိုင်းနေ နေတယ်ပေါ့”
– သူတို့ဘက်ကရော အင်အား ထပ်တိုးတာ ကြားလားဗျ။
“သူတို့ဘက်က အင်အား အခုလောက်ဆိုရင် တိုးမယ်ထင်တယ်”
– နယ်မြေအားဖြင့် ဘယ်နေရာကျမလဲဗျ။
“ လွယ်ကျယ်နဲ့ မိုင် ၂ မိုင် ၃ မိုင်လောက်မှာ ကျမယ်။ လွယ်ကျယ်ရဲ့ အရှေ့ဘက်လေ မိုင်ဂျာယန် သွားတဲ့လမ်းပဲလေ”
– နှစ်ဘက် ပစ်ကြတယ်ဆိုတော့ ထိခိုက်မှုတွေရော ရှိကြလားဗျ။
– ဘယ်သူက စ ပစ်တာလဲဗျ။
– နောက်ထပ်ရော ဖြစ်နိုင်မယ့် အခြေအနေရှိလား။
“တင်းမာမှုတော့ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ပစ်မိန့် အကုန်ပေးထားပြီလေ အောက်ခြေတပ်အထိ။ အထက်ကို တင်စရာ မလိုဘူး။ အခုဟာက တပ်ရင်းမှူးတွေ အဆင့်မှာကိုက အကုန်လုံး”﻿
သေနတ်ဆိုတဲ့ ဟာကလည်း ပစ်ဘို့ ပဲလေနော
ဂျက်ကောင်းမှန်လို့ ကတော့ ဖရောင်းချက်စက္ကူနဲ့ ပိတ်လို့ ရတာဟုတ်ဝူးလေ
သေနတ်ကိုင်တဲ့ သူမှန်သမျှကတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုး( ဘာကာကွယ်ရေး ညာကာကွယ်ရေး) ပြောတာဘဲ
နံပါတ် တစ်အနေနဲ့ ကတော့ သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့ကောင်ကတော့ သူ့ ကိုယ်သူ အရင်ကာကွယ်ရမှာဘဲ
သေနတ်ရှိတော့ရန်သူက ရှိသွားပြီ မချရတာ ကြာနေပြီ ဆိုတော့ ချကြပေါ့ကွာ
ဘာမှတတ်နိုင်ပါဘူး ဒီတစ်ပွဲကတော့ တစ်ဖက်ဖက်တော့ ပြုတ်မယ်ထင်တယ်
ပြုတ်ချင်တဲ့ကောင်ပြုတ်ဘဲ ဟို မေဂလွား တစ်ရုတ် နှစ်ဖက်လွှ လုပ်တာ ခံရတယ်ဆိုတာ အောက်ခြေ ခံ
နှစ်ဖက်စလုံးက အသေအကြေတိုက်ရတဲ့ စစ်သားတွေ ကတော့ သိနိုင်မယ်ထင်ဘူး
၀ီစကီလား ဘီယာလား ဘာဆိုလား အင်တာနက်ကနေ အချက်အလက်တွေ ဘာလုပ်တာလည်းမသိဘူး
ဒီရွာထည်းကို လည်း တရုပ်စစ်ခွေးတွေ ဖတ်ခြင်ဖတ်မှာပေါ့
မေ့သွားလို့မဆဲရဘူးဆိုဘဲ
အရှေ့ အနောက် တောင် မြောက် အထက်နတ်ပြည် အောက်အဝီစိ ၌ ရှိကုန်သော
တရုတ်တွေ ကျမ္မာပါစေ ခြမ်းသာပါစေ
ကိုအောင်ပု မေတ္တာတော်တော် စွမ်းတယ်ထင်တယ်။ ခင်ဗျားအိမ်နားက တရုတ် take out စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ထောင်ကဲက ကိုပုရေးတဲ့ ကွန်းမန့်ကိုဖတ်ပြီး ဝက်သားခုတ်တဲ့ဓါးမကို သွေးနေလေရဲ့။ ဒီတလတော့ ဝက်သားကင် အခေါက်ကင် စားဖို့ကို ရှောင်အုံးမှပါလေ။
ပါဝါရှိတဲ့ အကောင်က နောက်ကနေတာ ဘုမသိ ဘမသိ ကျကျသွားတာက ရှေ့ကပွန်းတွေဗျ
ဘုရင်ကြီးကျမသွားဖို့ ကလည်း ဘာကောင်ကြီးဖြစ်နေနေ အသေခံပေးရတယ်
အဲဒိတော့ စောစောကလိုမေတ္တာပဲ ပို့တာကောင်းပါတယ်ဗျာ
ခွေးမသား ဗမာတွေ မိုက်ကယ်ဆိုတာ ငါတို့အိမ်ဘေးကခွေးနာမည်ပဲ
ဗမာကိုခွေးမသားလို့ စွပ်စွဲတဲ့ မင်းတို့တရုတ်တွေ အင်မတန်ရိုင်းတယ် သိလား။ မင်းတို့တရုတ်တွေ တတိုင်းပြည်လုံးကိုရိုင်းတာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရိုင်းလို့ရိုင်းမှန်း လည်းမသိဘူး။ မင်းတို့ရဲ့ ဇာတိပုဂ်ဂလတန်ဖိုးကိုက အောက်တန်းကျတာ။ ဗမာပြည် မှာ ဗမာစာရေးပြီး တရုတ်ကိုဆဲတာ ဘာဖြစ်လဲကွ။ မင်းကတရုတ်ဆိုရင် မင်းဗမာလိုမရေးနဲ့ပေါ့။ ဗမာပြည်မှာလဲ မနေနဲ့ပေါ့။ ဗမာပြည် ကိုလည်း မျက်စောင်းမထိုးနဲ့ပေါ့။ မင်းတို့တရုတ်တွေ ဗမာပြည်ကိုအဘက်ဘက်က အပိုင်စီးမောင်ပိုင်စီးချင်နေတာ တစ်ကမ်ဘာ လုံး သိတယ်။ မင်းကမသိဟန်ဆောင်ပြီး ဗမာတစ်ယောက်ကိုလာဆဲလို့မရဘူး။ မင်းနာမည် ရင်နင့်လား။ ခွေးသား။
Yin Nint မင်းဘာကောင်လဲ တရုတ်လါး ကောက်စိုင်း ကမ်းနီနာဝူး ကြီပိုင်းလံကျောက်
မှတ်ပြီလား။ အဲဒါ ငါ့ mp4 လေး နှစ်ရက်နဲ့ ပျက်သွားလို့ ထုတ်တဲ့သူတွေကို သူတို့နားလည်အောင် ဆဲတာ …..
ငါကဘာမှစပြောတာမဟုတ်ဘူး ကြားလား တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေရင်း ရှုံးနိမ့်နေတဲ့ခွေးသား
ပြီးတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုရေးချင်တာလဲ ရေးကမရေးတတ်ဘူး ကမ်ဘာတဲ့ စောက်သုံးကမကျ
မှော်ဆရာဆိုတဲ့သူ ခင်ဗျားဘာသာခင်ဗျားစောက်သုံးမကျလို့ အပေါစားသွားဝယ်တာလေ
_ီး ဖြစ်လို့ 
စောစောစီးစီး ရွာထဲမှာ ဆဲနေရတာလဲ
မင်းတို့ ရွာမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမရှိဘူးလား
သဂျီး အိပ်နေတယ်ဆိုတာ နားမလယ်ဘူးလား
( ဟေ့ကောင် တရုပ်မသား ဆဲပြီးရင် မေတ္တာပြန်ပို့ လေကွာ)
ha ha , ye ya tal.
KIO and Military is fight or not I don’t know. Now , they are fighting here. ha ha :)))))))))))))
ဟေ့၊ ရင်နင့်။ မင်းငါ့စားလုံးပေါင်းအမှားကိုသာ ထောက်ပြနိုင်တယ်။ အဓိက အချက်ကို မင်းမထောက်ပြနိုင်ပါဘူး။ ငါပြောတာက မှားနေလို့လား။ ကုလားပြည်နဲ့တရုတ်ပြည်ရဲ့ မဟာဗျူဟာကျတဲ့နိုင်ငံ ငါတို့မြန်မာပြည်ကို လိုချင်တာတရုတ်လေ။ ကုလားတွေကတောင် ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်လေးစား၊ သူ့လူမျိုးကိုလည်းလေးစားလို့ နောက်ဆုတ်သွားပြီပဲ။ နောက်မဆုတ်တာ တရုတ်ပဲ။ မဟုတ်တာလုပ်ရင် အဆဲခံ ရမှာပဲကွ။ မင်းကိုဆဲတာ ငါ့အမှားပါ။ ငါက လောဘကြီးလွန်းတဲ့တရုတ်မှန်သမျှကို ဆဲတယ်လို့ယူဆလိုက်ပါ။